May 14, 2021 - Achawlaymyar
ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္ကို ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ
ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္ကို ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ မဂၤလာပါ ခ်စ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ခုေျပာျပမယ့္ အေၾကာင္းေလးကေတာ့ စကစရဲ႕ မထင္မွတ္ထားတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ ပိုင္တံခြန္ စကစ အာဏာ စသိမ္းကတည္းက ျပည္သူနဲ႔ တေသြးထဲ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ မင္းသားေခ်ာ ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံ လိုက္ရၿပီလို႔ ဟန္ၿငိမ္းဦး Page မွာ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စ က စ မွ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္လို႔ တိမ္းေရွာင္ ေနခဲ့ေပမယ့္လည္း ဖမ္းဆီးခံ လိုက္ ရ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပ ရိတ္ သတ္ အ ခ်စ္ … Read more
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ (၄)ကြိမ်မြောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တည်ထောင်သူ ဦးဇော်ဇော် (Founder and Chairman) မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦး (Executive Chairman) အား ရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက် ဧရာဝတီဘဏ် အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်၃လကျော်အတွင်း ဦးဇော်ဇော်ကို ပထမဆုံးပြန်လည်မြင်တွေ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Source -AYAtelegram —————- ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီဘဏ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ တည္ေထာင္သူ … Read more
ဒီအပြုအမူတွေက အချစ်ရေးတစ်ခုကို ပြိုလဲစေတယ်တဲ့
ခိုင်မာတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကိုတောင် ဒီအချက်တွေကြောင့် ပြိုလဲသွားစေနိုင်တာတဲ့လေ။ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။ ဒီလို အချက်တွေကို ရှောင်လိုက်ပါနော်။ ၁။ မတိုင္ပင္ဘူး ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ကိုယ့်ချစ်သူ နောက်မှ သိလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ သူ ဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲနော်။ ဒါကြောင့် သူများပြောမှ သိလိုက်ရတယ် မဖြစ်အောင် တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ကြပါနော်။ RS တည်မြဲဖို့ ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ၂။ နောက်ကျတယ် စောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ကြုံဖူးသူမှ သိတာပါ။ တခါတလေ နောက်ကျတာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် အမြဲနောက်ကျတာကတော့ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ RS တခုမှာ အပြန်အလှန် လေးစားမှုကလည်း မပါမဖြစ်စမြဲဆိုတော့ ကိုယ်နောက်ကျလို့ စောင့်နေရသူရဲ့ အဖြစ်ကိုလည်း လေးစား အားနာသင့်ပါတယ်။ ၃။ အော်ငေါက်တယ် လူတစ်ယောက်အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ … Read more
ရေးထားတဲ့စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ ရေးထားတဲ့စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် စိတ်ပါနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်အမျိုးသမီးတွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ တကယ်ရောအဲ့လောက်ခက်လို့လား ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြမယ် အချက် ၁၀ ခ်က္ကေတာ့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါနေတာကို သိနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ၁. သင့်အနားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေခြင်း များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အပေါ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေက အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နဲနဲတော့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်တယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလိုသူခံစားလာရရင် ရှက်ရွံ့လာပြီးတော့ သင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတတ်တယ် ။ ၂. ရုတ်တရက်လာထိနေခြင်း တစ်ယောက်ယောက်စိတ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်တာက ယေဘုယျအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ ။ သူစိတ်ပါနေပြီဆိုရင်သင့်ကိုထိဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ် ။ အခုလိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုက်နဲ့တော့ ။ ၃. ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပြောခြင်း သူမရဲ့အပြောအဆိုအမူအယာကို သင်သတိထားမိလာလိမ့်မယ် ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို ညစ်ပေပေပြောတတ်လာပြီးတော့ ချွဲတဲ့အသံမျိုးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ် ။ … Read more
စနေသားသမီးတွေ ဘာလုပ်လုပ်အတားအဆီး အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ အဆင်မပြေတာ ကြိုးစားမှုနဲ့ ဇွဲရှိရှိလုပ်နေပေမယ့် လုပ်သမျှ အရာမထင်တာ ကံပိတ်လာဘ်ပိတ်ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ ကြုံလာခဲ့ရင် ကံနိမ့်နေပြီလားမသိဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်ဝင်လာတတ်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကံမြင့်ကံပွင့်ပြီး အခက်အခဲတွေကျော်လွှားတိုးတတ် အောင်မြင်စေဖို့ ပြုလုပ်ဖွယ် ယတြာတွေ ဒါနပြုပေးပါ့မယ် စနေသားသမီးများ စနေနေ့တိုင်း မနက် ၉း၀၀ မှ ၉း၃၀အတွင်း နေအိမ်ဘုရားမှာနာနတ်သီး ၁၀စိပ် (သို့) ထန်းလျက် ၁၀ ခဲနှင့်အတူ ဒိန်ချဉ် (သို့) နို့ချဉ် ၁ခွက်ကပ်လှုပေးပါ။ ( ဣတိပိသော ဘဂဝါ သုဂတော ) ဂုဏ်တော်ကို ယုံကွညျသဒ်ဓါစိတျဖွငျ့လေးနကျစှာ ပုတီး ၂ ပါတ်စိပ်၍ ပွါးများပူဇော်ပြီး လိုရာတောင်းဆုကို လေးနက်စွာပြုပါဗျာ။ အဲ့ဒီနေ့တနေ့တာလုံး အနက်ရောင်များများပါသော … Read more
မိန်းကလေးတွေကြား နာမည်ကြီးနေတဲ့ KIA က ဗိုလ်ကြီးဆိုတာ…
မိန်းကလေးတွေကြား နာမည်ကြီးနေတဲ့ KIA က ဗိုလ်ကြီးဆိုတာ KIA က ဗိုလ်ကြီးဆိုတဲ့ သတင်းအမှားများ ရပ်တန့်ပေးဖို့ ခွန်ဖုန်း ပြော Mister TCU Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဗန်းမော်မြို့ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် Mister Bhamo ခွန်ဖုန်းဟာ သီချင်းတပုဒ်ရဲ့ Music Video အတွက် KIA ဝတ်စုံပုံဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အဲဒီ ဝတ်စုံနဲ့ KIA ဗိုလ်ကြီးဆိုတဲ့ သတင်းအမှားများ ထွက်ပေါ် နေတဲ့အပေါ် အခုလိုပဲ ဆိုပါတယ် “KIA ဝတ်စုံနဲ့ပုံက Music Video ရိုက်တုန်းက ရိုက်ထားတာပါ။ နိုင်ငံရေး ကောင်းခဲ့စဉ်ကပါ။ အခုလို အချိန်မှာ ကျနော့်ကို KIA က ဗိုလ်ကြီးလို့ ရေးတာတွေ ရပ်စေချင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာ … Read more
သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါ .. ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲလို့မေးရင် ဘာနဲ့မှတော့ နှိုင်းပြလို့မရဘူး သိပ်ချစ်တာပေါ့လို့ပဲဖြေတတ်တယ် … ဘာကြောင့်ချစ်မိခဲ့လဲဆိုတဲ့ အဖြေတွေမရှိဘူး ဘယ်လောက်ထိ ချစ်မှာလဲဆိုတာတွေ မသိဘူး .. ကျွန်မသိတာ သူ့ကို သိပ်ချစ်လွန်းခဲ့တာတော့သိတယ် ။ လိမ်နေမှန်းမသိအောင် ကျွန်မ မတုံးအခဲ့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် သူလိမ်နေတဲ့အခါ ကျွန်မ ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ် .. ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင် ကျွန်မမှာ အဖြေမရှိဘူး လိမ်နေမှန်းသိသိရဲ့နဲ့တောင် ငြိမ်ပြီးခံနေတဲ့အထိ ကျွန်မ ကန်းနေမိတယ် ထင်တယ် ။ သူ့နေရာမှာ တခြားတစ်ယောက်သာဆိုရင် ကျွန်မ ဒီလိုနားထောင်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ် အမှားတွေရှိလာတဲ့အခါ ခွင့်လွှတ်နေမိတုန်းပဲ ။ လူပဲလေ အမှားနဲ့မကင်းပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အမှားတွေကို တစ်ကြိမ်မက နှစ်ကြိမ်မက ကျွန်မ ခွင့်လွှတ်နေခဲ့မိတာ အဲ့ဒီအရာက … Read more
အမျိုးသမီးတို့ရယ် ကိုယ်ဆွဲထားမှ မြဲမယ့်လက်များ ဖြုတ်ချလိုက်ပါကွယ် “မိန်းမသားတို့အတွက်” ချစ်သူချင်းလမ်းခွဲခွဲအိမ်ထောင်တစ်ခု ပြိုကွဲကွဲ မျက်ရည်လည်ရွဲငိုပွဲဆင်တာ မိခင်စိတ်ရှင်နူးညံ့ငြင်သာ အားနွဲ့ပါတဲ့ မိန်းမသားတွေပါ ချစ်သူအဖြစ် ဆန်းစစ်ရွေးချယ် ဘဝတစ်သက် ရွှေလက်တွဲဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ရူး ပျော်မြူးမဆုံးခင် မထင်မှတ်ဘဲ ငင်လာကြမ္မာ ခြံခုန်သူက ပေးရက်ပါတဲ့ အသည်းကွဲဝေဒနာ အိမ်ထောင်တစ်ခု အစပြုတော့ ရိုးမြေကျပဲ ထင်ကြတယ် နေ့တွေလပြောင်း ကာလညောင်းတော့ ခြံခုန်စနိုက် ဇာတ်တွေရှုပ်လာ မျက်ရည်ဖြာပေါ့ ဇနီးသည်ရယ် မိန်းမသားတစ်ယောက်အတွက် သောကကြီးစွာ ဗေဒင်ယတြာ မျိုးစုံစွာလေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရယ် ကိုယ်ဆွဲထားမှ မြဲမယ့်လက်များ ဖြုတ်ချလိုက်ပါကွယ် ရဲဝံ့စိတ်ထား ကြံ့ခိုင်အားနဲ့ လောကဓံက တွန်းဖြိုလှဲလည်း ပစ်တိုင်းထောင်ထုံး နှလုံးမူထားရင်း အလုပ်တွင်စိတ်နစ်ဝင်ငွေတိုးလာ နှစ်ကာလကြာ ကိုယ်ပိုင်အနေအထား အဆင့်အတန်းများ မြင့်သထက်မြင့်လာ အတိတ်ကအသည်းကွဲအရိပ်ဝေဒနာထဲ အပြီးသတ်နှုတ်ဆက် … Read more
“အားငယ္ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္က်ရ ငိုရတယ္ ကိုယ္ဝန္နဲ႔မို႔ စိတ္ေပ်ာ့ေနတာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ဒါေပမယ့္ ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ အလုပ္ျပန္ဝင္တဲ့လူေတြက အစကတည္းက ရင္းရဲတဲ့သူေတြမွ မဟုတ္ဘဲကိုယ့္အက်ိဳးထိမွာ ေၾကာက္တဲ့အတၱႀကီးတဲ့ သူမ်ားေယာင္လို႔ လိုက္ေယာင္ရတဲ့ သူရဲေဘာေၾကာင္ auto CDM သမားေတြမို႔ မလြမ္းေလာက္ပါဘူး၊ အဓိက ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္မဝင္ပဲ အေပၚကေန လက္ညိဳးထိုးခိုင္းေနလို႔မရပါဘူးCDM ဟာအာဏာရွင္ယႏၲရားပ်က္ဖို႔ က်န္းမာေရးက႑က သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူးလို႔ ဆိုသူေတြအတြက္ သေဘာမတူပါဘူးေနာ္အဘက္ဘက္က ဘာမွ လုပ္မရ failed state ျဖစ္ေလ ေကာင္းေလမို႔CDM ကလည္း CDM ဆက္ေတာင့္ခံထားဖို႔လိုပါတယ္ဒါေၾကာင့္ကိုယ့္ထက္ ပို ေနေရးစားေရးခက္မယ့္ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ CDM ေထာက္ပံ့ေၾကး မယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းကိုယ့္ရွိတဲ့အထဲက လႉျခင္း ေဝငွျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းကိုယ္တိုင္ ေနေရးစားေရး ခက္ခဲေပမယ့္ ပုန္းေရွာင္ေနဆဲ အသံတတိတ္ေနတဲ့ကာလေတြမွာ ပံ့ပိုးမႈေတြ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ပါတယ္ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို လႉတာမ်ိဳးပါ ( … Read more